Kununurwa Munamato Kumiririra Kuita muVine | MINYENGETERO MARI
Mugovera, Gunyana 25, 2021
musha Pfungwa dzemunamato Kununurwa Munamato Kumiririra Kubata muVini
Kununurwa Munamato Kumiririra Kubata muVini
Kana muKristu achishandira pasina, icho chiratidzo chekuti dhiabhori ari pabasa. Kana munhu achishanda kunge nzou uye achidya svosve, hachisi kuda kwaMwari. Ndokusaka ndanyora izvi munamato wekuununura pamusoro pokubata pasina. Kumabasa ega ega kune purofiti, Mwari anoda kuti tibudirire pane zvese zvatinoita. Semwana waMwari, budiriro inhaka yako. Asi dhiabhori anogara achikwikwidzana newe kuti utore izvo izvo izvo izvo izvo izvo izvo izvo Mwari zvaakakupa kare. Tinofanira kuramba Dhiabhori uye isu tinoita izvozvo pachikuva chemunamato.
Ndinokukurudzira kuti uite munamato uyu wekununura kuti usashande pasina nemoyo wako wese. Iwe unofanirwa kuramba uchidzivisa Dhiabhori kwaari kuti atize kubva kuhupenyu hwako uye nekwavo. Muromo wakavharwa ndiyo yakavharirwa mhedzisiro, dhiabhori iwe wausingaramba unoramba uchivhima hupenyu hwako. Naizvozvo simuka unamate nzira yako pokubata pasina mari. Sezvo iwe uchinamata uyu munamato wekununurwa nhasi ndiri kuona Mwari vachitsiura mweya yega yega isina chibereko muhupenyu hwako muzita raJesu.
1. Baba, ndinokutendai nekundinunura kubva muuranda hwekushandira pasina muzita raJesu ..
2. Baba, nengoni dzenyu, ndiparadzanisei kubva pamasimba ese akashata achirwira basa rangu muna Jesu.
3. Ndinozvifukidza nebasa rangu neropa raJesu.
4. Ndinozvisunungura kubva muhusungwa hwakagara nhaka hwevashandi vasina zvibereko, muzita raJesu.
5.Ishe, tuma demo remoto kunheyo dzehupenyu hwangu uye paradza huipi hwese hwakashata ipapo.
6. Ropa raJesu ngaribude muhurongwa hwangu sembeu yese ya satanic yembeu isina zvibereko muzita raJesu.
7. Ndinozvisunungura kubva mukubatwa kwedambudziko ripi neripi rakaendeswa muhupenyu hwangu kubva mudumbu, muzita raJesu.
8. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva pane dzose dzakagarwa dzakaipa chibvumirano urombo nekushushikana muzita raJesu.
9. Ini ndinotyora ndozvisunungura kubva kutuko dzese dzakaipa dzakagarwa nhaka dze "monkey dey work uye baboon dey chop" muzita raJesu.
10. Ini ndinosuka zvakaipa zvese zvandakadyiswa nazvo semwana, muzita raJesu.
11.Ndinoraira vese vakasimba vanovamba pahupenyu hwangu kuti vafe mitezo, muzita raJesu.
12.Ngati chero tsvimbo yevakaipa inosimuka kurwisa mutsara wemhuri yangu ishandiswe simba nekuda kwangu, muzita raJesu.
13.Ndinodzima zvese mhedzisiro yezita ripi neripi rakaipa rakanamatira munhu wangu, muzita raJesu.
14.Iwe wakashata makavakirwa masango, ekufamba zvishoma muhupenyu hwangu, ndinokuparadza kubva kumidzi, muzita raJesu.
15. Ini ndinotyora uye ndichisunungura kubva kumhando dzose dzekunyengedzwa nemadhimoni munzvimbo yangu yebasa, muzita raJesu.
16.Ndinozvisunungura kubva pane yakaipa nekutonga kwese munzvimbo yangu yebasa, muzita raJesu.
17.Musuwo wese ngauvhurwe muvengi nenheyo dzangu ngaivharwe nekusingaperi neropa raJesu.
18.Ishe Jesu, famba udzokere mukati mega yega yehupenyu hwangu uye undinunure pandinoda kununurwa, ndiporese pandinoda kuporeswa, ndisandure pandinoda shanduko.
19.Mafungiro ese akaipa ngaandirasire kure kubva kunobva simba, muzita raJesu.
20.Vese vanondiseka vachisekesa vanopupurira uchapupu hwangu, muzita raJesu Kristu
21.Rega urongwa hwese hwekuparadza hwevavengi hwakanangana neni hupfuure muzviso zvavo, muzita raJesu.
22.Nyaya yangu yekuseka ishanduke ive sosi yechishamiso, muzita raJesu.
23Masimba ose anotsigira zvakaipa nezvangu ngaanyadziswe uye nokunyadziswa muzita raJesu.
24.Ati murume akasindimara ane simba rakakumikidzwa kuzorwa neni awire pasi uye agone kushaya simba, muzita raJesu.
25.Tora nzvimbo yakasimba yemweya yese inopandukira inopesana nehupenyu hwangu iparadzwe muzita raJesu
26.Ati n'anga dzese dzikabirwa kuti dzindituke dzirege kutevera zvakarairwa naBharamu, muzita raJesu.
27.Ase mweya yemadhimoni yega yega inoronga zvakaipa pamusoro pangu igamuchire matombo emoto, muzita raJesu.
28.Ana murume wese kana mukadzi anotsvaga sa mwari muhupenyu hwangu ngaawire achitevedzera raFarao, muzita raJesu.
29.Ati mweya yega yega yekusagadzikana iparadzwe muhupenyu hwangu zvachose muzita raJesu.
30.Rega mweya yega yega yekutadza uye kuzvidemba iparadzwe muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
31.Akaita ese madhimoni vamiriri, zvinokanganisa basa rangu kuwa uye kufa muzita raJesu.
32.Ase manipulates satan anovavarira kushandura destiny yangu ishungurudzike, muzita raJesu.
33.Ngavatize vese vasingabatsire vanoshambadzira kunaka kwangu ngavanyaradzwe, muzita raJesu.
34.Rega mabhegi ese uye homwe muhupenyu hwangu zvisunganidzwe, muzita raJesu.
35.Meso ose akaipa ngaanditarise ave bofu, muzita raJesu
36. Rega zvakaipa zvese zvinobata chero zvisina kujairika kubata kwadhiyeri zibviswe kubva muhupenyu hwangu, munajesus
37. Ini ndinoraira zvese zvemadhimoni reverse magiya akaiswa kutadzisa kufambira mberi kwangu kuti riparadzwe, muzita raJesu.
38. Ani naani akaipa akatumirwa kuzondikuvadza achaurayiwa nemutumwa anotangisa muzita raJesu.
39.Zora zvombo zvese nemidziyo yevanodzvinyirira nevanotambudza muhupenyu hwangu nebasa ngavapihwe simba, muzita raJesu.
40.Moto waMwari ngaupise simba rose rinoshanda chero mota yemweya inoshanda kwandiri, muzita raJesu.
41. Baba regai ruoko rwemadhimoni rwese ruchirwisa kufambira mberi kwangu ruvhunike muzita raJesu
42. Baba, regai chero munhu akaipa aipa zano achitaura zvakaipa nezvangu munzvimbo yangu yebasa anyaradzwe izvozvi !! Neropa raJesu, muzita raJesu.
43. Baba, ruoko rwenyu rune simba ngaruparadze ruoko rwangu rwekuokohwa!
44. Ndinozvinunura kubva mumweya wepamusoro uye pasi muzita raJesu.
45. Ndinozvinunura mumweya wekudzokera kumashure muzita raJesu
46. ​​Ndinozvinunura mumweya wekushanda pasina chibereko muzita raJesu
47. Kubva nhasi ndinoparidza kuti ini handizomboshandira pasina muzita raJesu
48. Kubva nhasi, ndinotema kuti handichabati uye mumwe murume adye muzita raJesu.
49. Kubva nhasi, ndinoparidza kuti ndichagara ndichidya zvibereko zvebasa rangu muzita raJesu.
50. Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.
Previous nyaya50 Minamato YeMinamato Kupesana neKuparadza Kuuraya
inotevera30 Mavhesi eBhaibheri nezvekuchengetedza kubva kuvavengi
Kunamata Points Kupokana neDhimoni Kubatana Kupokana Newe
Ewere Chikunguru 30, 2020 Na8: 07 pm
Muzita rakasimba raJesu Kristu zita Amen. Ini ndinoda minamato yese yakanaka pano.
Mufundisi Kortu Koilor Mbudzi 2, 2020 Na5: 42 pm
Ini ndakakomborerwa ndichishandisa aya minyengetero.
Irelen E Zvita 13, 2020 At 12:08 pm
Ndinoramba kukundwa nekutyisidzirwa, homwe dzinodonha dzakasunganidzwa muhupenyu hwangu muzita raJesu Amen
Zvikonzero zvishanu nei Vatendi Vachirarama Mukutya
20 Kununurwa Munamato Kuti Vhure Curses Uye Spell
Nhanhatu Matanho Ekutaura Mhedzisiro Inotungamirirwa Munamato
30 Minamato yeMinamato Yekuporesa uye Kununura